Iindiza eziya eIraq, eSpain, eKenya, eSlovakia ziyaqhubeka kwakhona ukusuka eRussia ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Iindiza eziya eIraq, eSpain, eKenya, eSlovakia ziyaqhubeka kwakhona ukusuka eRussia ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba eziQhekezayo zase-Iraq • IKenya Breaking News • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Iindaba zaseSlovakia eziQhekezayo • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ummiselo uthintela okwexeshana ukungena kwiRussian Federation yabemi bamanye amazwe kunye nabantu abangenabumi ngenxa yesifo se-coronavirus. Uxwebhu lokuncamathisela lumisela uluhlu lwamazwe, apho abemi banokungena khona eRashiya ngeendawo zokungena emoyeni.
I-Russia yandisa uluhlu lwamazwe, apho abemi baya kuphinda bavunyelwe ukungena eRashiya ngomoya.
I-Iraq, iSpain, iKenya, iSlovakia zongezwe kuluhlu lwamazwe iRussia iqala kwakhona ngenkonzo yomoya.
Ukumiswa kweRussia kweenqwelomoya eTanzania ngenxa yemeko yesifo kwilizwe sele kwandisiwe kwada kwango-Okthobha u-1.
Kummiselo wekhabhinethi okhutshwe kwi-portal esemthethweni yolwazi lwezomthetho, amagosa aseburhulumenteni baseRussia abhengeze ukwanda koluhlu lwamazwe, abemi abaza kuphinda bavunyelwe ukungena eRashiya ngokuhamba ngenqwelomoya.
Uluhlu lwandiswe ngamazwe amane kwaye ngoku kubandakanya i-Iraq, iSpain, iKenya neSlovakia.
Uxwebhu lokuncamathisela kwisigqibo sikarhulumente sika-Matshi 16, 2020, sandisiwe ngezi zikhundla zilandelayo: “I-Iraq, iSpain, iKenya, iSlovakia. ” Ummiselo uthintela ukungena kwi IRussian Federation Abemi bamanye amazwe kunye nabantu abangenabumi ngenxa yobhubhane we-coronavirus. Uxwebhu lokuncamathisela lumisela uluhlu lwamazwe, apho abemi banokungena khona eRashiya ngeendawo zokungena emoyeni.
Olu xwebhu lutyikitywe nge-21 ka-Septemba ngo-2021. Iziko le-anti-coronavirus labika ngaphambili ukuba ukuqala kwalo mhla i-Russia iqale inkonzo yomoya ne-Iraq, Spain, Kenya ne-Slovakia, kunye nokususa yonke imiqobo kwinkonzo yomoya kunye ne-Belarus.
Kwangoko, iMoscow yaphinda yavula iinqwelomoya kumazwe angama-53. Okwangoku, ukunqunyanyiswa kweenqwelomoya eziya eTanzania ngenxa yemeko yesifo elizweni kwandiswa ngo-Okthobha u-1.